DHAGAYSO: Fanaanka Aar Maanta oo si xun loogu cunsuriyeeyay dalka Mareykanka & Qaabkii loola dhaqmay..? | Garqaad News Agency
DHAGAYSO: Fanaanka Aar Maanta oo si xun loogu cunsuriyeeyay dalka Mareykanka & Qaabkii loola dhaqmay..?
Oct 8, 2017 - Comments off
Fannaanka Xasan Nuur Sayid (Aar Maanta) oo ka mid ah fannaaniinta Somaliyeed, ayaa si kulul u weeraray Dowladda Somaliya, ka dib markii uu ku eedeeyay inaanay Mareykanka kala hadlin xayiraadaha uu ku soo rogay dalal ay Somaliya ka mid tahay.
Hadalka fannaanka ka soo yeeray, ayaa wuxuu ku soo beegmaya, ka dib markii uu fal cunsuriyad leh uu kala kulmay Dowladda Mareykanka, taa oo dib u dhac ku keentay bandhig faneed uu ku qaban lahaa Gobolka Minnesota.
HOOS KA DHAGAYSO WAREYSIGIISA
Fannaanka iyo kooxdiisa (The Urban Nomads) oo shan xubnood ka kooban, ayaa waxaa lagu waday in toddobaadkan ay bandhig faneed ku qabtaan Minnesota, iyadoona uu dib u dhac ku yimid, markii aan isaga la siinin fiisihii dal ku galka ee dalkaasi, halka afartii xubnood ee kale fiisaha la siiyay.